I-101 BADASS TATTOOS YAMADODA: UYILO OLUPHOLILEYO + IMIBONO (ISIKHOKELO SIKA-2021) - IITATTOOS
Eyona Iitattoos I-101 Badass Tattoos yaMadoda
Ngee-tattoos ezininzi ze-badass onokukhetha kuzo, kunokuba nzima ukuba abafana bakhethe kuzo zonke uyilo olupholileyo kwi-Intanethi. Kodwa ezinye iimbono ze-badass ze-tattoo zimalunga nomsebenzi ngokwawo. Wonke umntu unesizathu esahlukileyo sokufumana itattoo. Abanye bafuna ukubeka usapho ngesicatshulwa esinentsingiselo, ngelixa abanye befuna indlela eyoyikekayo yokubonisa ebonisa imvukelo kunye nokuzimela. Nokuba siyintoni na isizathu sokufuna kwakho i-inked, nazi ezona tattoos ze-badass zabafana.
Nokuba ufuna i-badass ingalo , ingalo , umva , isifuba , igxalaba, intamo isihlahla, isandla , intamo okanye Umvambo womkhono , ingqokelela yethu yemifanekiso iya kukunceda ufumane eyona mizobo ilungileyo. Side senza inqaku lokubandakanya inani leentlobo ezahlukeneyo, ezinje Ingonyama , inamba , wavuka uhlanga, ukakayi , umnqamlezo , kunye noyilo lwe tattoo samurai. Ekugqibeleni, ukusuka kumncinci kwaye kulula ukuya kumkhulu, ubudoda kunye noloyiko, siyathemba ukuba uya kuphefumlelwa kwezi zimvo zizodwa!
Iingcamango zeBadass Tattoo
Ngelixa ukufumana itattoo ye-badass kunokuba nzima, ngethamsanqa, zininzi iindlela zokwenza iprojekthi yobudoda, ukomelela kunye nokuqina. Abafana bahlala becinga ngento eyoyikisayo, eyoyikisayo endaweni yokugxila kwinto enzulu emele ifilosofi yobomi okanye inkolelo.
Emva kwayo yonke loo nto, iiTatoo ezipholileyo ziza ngeendlela ezahlukeneyo, iimilo, ubungakanani kunye nemibala, kodwa uninzi luyakhuthaza okanye luyakhuthaza ngandlela thile.
Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha abafana bafuna nje uyilo lwe-badass tattoo kuba ijongeka ilungile kwaye iyindoda. Nangona sonke sineempawu kunye neentsingiselo ezikhethekileyo, ngamanye amaxesha, amadoda afuna nje igazi, i-gore, imipu, iingcuka, kunye nee-tatoos zamadoda ezigulayo.
Nokuba ufuna uyilo oluhle olukhangeleka lupholile kwaye lunentsingiselo okanye itattoo eyoyikisayo neyoyikisayo kwaye ibangela uloyiko, kukho imizobo kunye nomsebenzi wobugcisa onokuthi uzalisekise iimfuno zakho.
Ukubona indlela inki yakho ebukeka ngayo ngokungathandekiyo, nazi ezinye zeetatoo ezilungileyo zamadoda. Fumanisa ezona zimvo ziphambili zoyilo lobudoda kwaye ufumane ukhuthazo lokuza nomfanekiso oyiliweyo oza kuthatha kumzobi wakho!
ulusu olubunayo lukama ngaphezulu
inombolo ye-8 yokucheba yonke indawo
inyanga kunye nekhaltyhuleyitha ekhulayo
ilanga, inyanga ukunyuka calculator
ilanga inyanga ukunyuka calculator
iindawo ezininzi ze tattoo ezibuhlungu
ukucheba iinwele zamadoda aneenwele eziwavy
I-101 Iimpawu eziLungileyo zeWolf zaMadoda